G talk မှာ မိမိရဲ့ သူငယ်ချင်းဟာ ဘယ်နိုင်ငံကလဲ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Computers & Technology » G talk မှာ မိမိရဲ့ သူငယ်ချင်းဟာ ဘယ်နိုင်ငံကလဲ
G talk မှာ မိမိရဲ့ သူငယ်ချင်းဟာ ဘယ်နိုင်ငံကလဲ
Posted by Mobile House on Sep 10, 2011 in Computers & Technology | 10 comments
မင်္ဂလာပါဗျာ နည်းလမ်လေးတစ်ခု တွေ့လာလို့ ပါ
G talk မှာ မိမိရဲ့ သူငယ်ချင်းဟာ ဘယ်နိုင်ငံကလဲဆိုတာရယ်နောက် location ကို
ညာပြောထားတာလား အမှန်ပြောတာလားဆိုတာကို ဖမ်းရအောင်ဗျာ..
ပထမဆုံးကတော့ မိမိရဲ့ မေးလ်ထဲကို ၀င်လိုက်ပါ..
ပြီးရင် ကိုယ်သိချင်တဲ့ လူ ပို့ထားတဲ့ မေးလ်ကို ဖွင့်လိုက်ပါ
ညာဘက် အပေါ်နားလေးက Reply ဘေးနားကို click လိုက်ပါ
show original ကိုဆက်လက် click ပါ
Original page မှာ ctrl+f အကူအညီနဲ့ Received: ဆိုတာလေး ကို ရှာလိုက်ပါ
Received by ဆိုတဲ့နောက်က တော့ သူ့ရဲ့ IP address ပေါ့
သူ့ရဲ့ location ကိုသိချင်ရင်တော့ http://www.whatismyipaddress.com မှာ
သူ့ရဲ့ IP addressကိုထည့်ပြီးရှာကြည့်ရင်တော့သူဘယ်နိုင်ငံကလည်းဆိုတာကို
Gtalk ကို တစ်ခုထက် ပိုသုံးကြမယ်
ဂျီတောအိုင်ကွန်လေးကို Right Click လုပ်ပြီး Properties
ဖျက်လိုက်ပြီးအဲဒီနေရာမှာ nomutex လို့ထည့်ပေးပြီးEnterခေါက်လိုက်
Step1. အရင်ဆုံး www.spypig.com ကိုဝင်ပြီး ကိုယ့်မေလ်းနဲ့ ကိုယ့် message တစ်ခုပေးလိုက်ပါ။ နောက်ပြီးကြိုက်တဲ့ ဝက်ပုံလေးတစ်ပုံကိုရွေးလိုက်ပါ။
Step2. Click to create my SpyPig ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ စက္ကန့်60စောင့်ပါ။ (အဲ့ဒိအချိန်မှာ ကိုယ် IP သိချင်တဲ့သူငယ်ချင်းဆီကို Mail ပို့ဖို့အတွက် Send Mail မှာ သူ့ရဲ့ Gmail လိပ်စာကိုဖြည့်ထားပါ။
Step3. စက္ကန့်60ပြည့်တဲ့အခါကျရင် Spypig မှာပေါ်လာတဲ့ ဝက်ပုံလေးကို ကလစ်နှိပ်ပြီး သူငယ်ချင်းဆီကိုပို့မဲ့ Mail ရဲ့ စာတွေဘာတွေရေးတဲ့အောက်က နေရာထိဆွဲလာပြီး လွှတ်ချလိုက်ပါ။ အဲ့လိုလုပ်လိုက်ရင် ဝက်ပုံလေးကနေ စာတန်းလေးဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။ (ဒါဆိုရင် ကိုယ့်သူငယ်ချင်းဆီကို စာတွေရေးပြီးပို့တဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ပဲ Link တစ်ခုပို့လိုက်သလိုဖြစ်သွားပါပြီ)
Step4. ပြီးရင် ပို့လိုက်ပါတော့။ သူကအဲ့ဒိကိုယ်ပို့တဲ့မေလ်းကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်ရင် ဘာမှမပါပဲ Link တစ်ခုကိုသွားတွေ့မှာပါ။ ဘာမသိညာမသိနဲ့ သူကအဲ့ဒိလင့်လေးကိုနှိပ်လိုက်ရင် ကိုယ့်မေလ်းဆီကိုသူ့ရဲ့ IP ပြန်ပေးတဲ့မေလ်းရောက်လာပါပြီ။
Step5. ပြီးရင် ဒီလင့်ကိုဖွင့်ပါ http://ip-address-lookup-v4.com/ ပြီးရင်အပေါ်က Lookup! ဆိုတဲ့နေရာမှာ သူငယ်ချင်းရဲ့ IP ကိုရိုက်လိုက်ရင် သူဘယ်နိုင်ငံကချက်နေတာလဲဆိုတာ googlemapနှင့်တကွသိရပါပြီ။ ( ကိုယ့်သိချင်တဲ့သူငယ်ချင်းကသာ Ipad ဒါမှမဟုတ် ဥရောပနိုင်ငံနဲ့ အနောက်နိုင်ငံတွေမှာသာဆိုရင် သူ့သုံးနေတဲ့နေရာကိုပါအတိအကျပြပါတယ်…အာရှနိုင်ငံတွေဆိုရင်တော့ IP ထိုင်ထားတဲ့ နေရာကိုသာပြပါတယ်..ဒါပေမဲ့ နိုင်ငံကတော့ လုံးဝလိမ်လို့မရပါဘူး
ရွာမှာနေတဲ့ သူငယ်ချင်းသုံးရင်ကော ဘယ်ရွာကလဲ သိလို့ရပါသလား….
မမမနောက တော့လေ တွေးတတ်ပါပေတယ်။ပေါက်ပေါက်ရှာရှာ။ဘယ်လို နေမလဲ မသိဘူး။ဟိုတပတ်ကလဲ တယောက်ပြောလို့ စမ်းကြည့်ပါသေးတယ်။ခုထပ်ကလိကြည့်ဦးမှပါ။
အဲဒိနည်းကို လုပ်နေတာတစ်နှစ်လောက်ရှိပြီ..။ လုံးဝ (လုံးဝ ) အဆင်မပြေပါ..။ အော်…..ငါတော်တော်ညံ့ပါသေးလားလို့ပဲ ……..လက်လျော့ထားတာကြာပါပြီ…..။
IP address ထဲ့စစ်လိုက်တိုင်း Address cannot be traced ဘဲဗျ။
မေးလ် စပမ်မာ တွေလက်ထဲရောက်သွားမှာ အသေအချာပါပဲ..။
IP number ရရင် http://ip-address-lookup-v4.com/
မှာ IP information မှာ ထည့် ပြီး go နိုပ်လိုက်ပါ။
ကိုယ်နဲ့ချက်နေတဲ့သူရဲ့ address ကို google earth ထဲကနေရှာလိုရရပါလား
gtalk အကောင့်ကို တစ်ခုထက်ပိုဖွင့်ချင်လို့ ဘယ်သူ့မေးရမှန်း မသိဖြစ်နေတာ အတော်ပဲ။ ကျေးဇူးတင်တယ်နော်။
ဖျက်လိုက်ပြီးအဲဒီနေရာမှာ nomutex လို့ထည့်ပေးပြီးEnterခေါက်လိုက်)
နောက်ဆုံးမှာ startmanu လို့ ရေးထားတာ မပါပါ။
Target box မှာ
“C:\_Program Files\_Google Talk\_googletalk.exe:” \_nomutex ရိုက်ထည့်လိုက်တော့လည်း “C:\_Program Files\_Google Talk\_googletalk.exe:” \_nomutex specified in the target box is not valid. Make sure the path and file name are correct. လို့ ပေါ်လာတယ်။